Halloween - ubusuku egcwele amademoni | Apg29
Halloween - ubusuku egcwele amademoni
Amaqiniso mayelana Halloween. Halloween limane i ngokwezifiso asendulo obuqaba ukuthi akekho umuntu okufanele bahlanganyele, awumncane yini kuyo yonke yobuKristu. Ukufa nokubi akhazinyuliswe.
Esikhathini 1840s, wathatha ikakhulukazi Irish naye lo mkhosi Celtic lapho efudukela Melika. EMelika, sesiye isidlo esikhulu, okukhona ngisho naphakathi kwamaKristu futhi kugujwa Okthoba 31. Kusukela Melika, it has "Americanized" iminyaka ethile, wabuyela eYurophu "izingebhezi" ozwakala amathanga, izangoma-isethi, buso ezesabekayo, abukhali, uSathane izimfoloko tombstones ngepulasitiki noma ukhuni.
"Ngakho-ke lokho indlela ayabulala, ugogo, uyise, izingane zakwabo nabangani ngabe unjani ukube babuya efile njengoba izipoki, izinhlaka zamathambo namademoni!"
Halloween kuyinto zangaphambi kobuKristu yobuqaba lomkhuba wokuthi uye wasungulwa ikakhulukazi phakathi kwabantu ithimba AmaCeltic. Lezi babedabuka-Asia Minor, ngisho kusukela aseGalathiya (Turkey yesimanje).
AmaCeltic oshiwo emlandweni European, okokuqala emhlabeni 500 BC, lapho ngemva kwenye indawo kwe wayehlala engxenyeni ke asenyakatho aseYurophu; endaweni ezungeze iDanube futhi entshonalanga eJalimane. EYurophu lehla ngokushesha inani bahamba ngegama "gaeler" noma "igridi".
Phakathi nesikhathi ukunwetshwa kobudlova AmaCeltic enwetshiwe endaweni yabo, entshonalanga maqondana eBelgium ikakhulukazi eBrithani, ikakhulukazi e-Ireland, eningizimu e-Italy naseSpain nangasempumalanga-Asia Minor, lapho baphinde esezinzile yeGalathiya.
"Galates" Futhi kwaba igama lesiGreki elisho the amaCelt. Kancane kancane bafika eScotland, naseWales nase-Ireland ngokukhethekile, kumelwe libhekwe njengelingcwele emzini AmaCeltic. imikhosi Celtic zenkolo, nangokuphila sekukonke, waholekela ngokusebenzisa nokulumba amandla yi-druids (umpristi-amakhosi). umhlatshelo oyisiko izitshalo, ngokuvamile Mistletoe nokudla okuphekiwe, isinkwa ngenjabulo, baba izakhi ezivamile, kodwa futhi lemihlatshelo yabantu iphutha (bheka Lindow Man e Manchester, ogama skeleton latholakala 1984).
Ukuphila nokufa unkulunkulu uSamhain
Stonehenge eNgilandi kubhekwa phakathi abafuna zanamuhla "keltism", ukuba ngalendoda ephumelela kakhulu kwamandla imilingo. Lapha kulapho yesimanje day abathakathi Labelaphi ukuba séances nemikhosi isiko. AmaCeltic ayegubha umkhosi sokuvuna kanye New Year-1 Novemba. Kwakuba usuku ongcwele yobuqaba. Iqembu kwaphawula ukuphela ehlobo futhi kanjalo ukufa kanye autumn entry amnyama ngokwemvelo, zona ngokwazo kwakusho ukuqala ukuphila ukuphila okusha ngokuphelele. Ngo umhlaba, emaqabungeni esewile, lihluma ama fresh.
Ngalesi sikhathi sonyaka kwakusho futhi, ukuthi umgubuzelo phakathi abantu abahlala ezweni futhi izwe libalalela efile (phakathi incarnations) kwaba thinnest. NGOBUSUKU obungaphambi kufike uNyaka Omusha, lo "kusihlwa ongcwele", lo "Hallow Eva", ie-October 31, lapho kwadingeka umbono ukuthi abafileyo, okungenani labo abafa phakathi nonyaka odlule, kanye nabanye, kokubili amandla okuhle nokubi nemimoya - wabuyela emhlabeni ngaphansi kokuphathwa yokufa nokuphila unkulunkulu (ukukhanya nobumnyama) uSamhain. Wabusela kokubili endaweni yonke futhi ngaphansi komhlaba.
Ngomhlaka 31 Ngakho Okthoba lalibonisa bonke abaphilayo futhi kusihlwa efile. Ibizwa nangokuthi "amadlozi Ebusuku," "Anfädernas Ebusuku" noma "ubusuku okhokho '".
Umhlangano magic abamhlophe nabansundu
Lapho kwabafileyo, kanye nezinye amandla omoya, weza Umhlaba kulobu busuku, kwadingeka ukuba, ngakolunye uhlangothi, ovuthayo amakhandlela omlilo ngoba okuhle benza izindawo lapho bebehlala khona: ekwamukeleni, ukukhomba nabo, kushwelezwe kuyo nge ukubheka njengabo, futhi ngakolunye ukudida izilwane ezidla ezinye kanye okwesabisa kubo emuva ngesikhathi esisodwa, bheka kunabo bese ugcine cool endlini.
Khanyisa, umlilo, igazi, izimpawu sokufa nobumnyama abangu elixutshwe. White futhi ukuloya zanakekelwa, ngosiko black magic. Druids ovuthayo omlilo ezinkulu ukungethusa nezidalwa ayingozi abathakathi okubi ezinjalo weza endiza. Abantu babuzwa ukucisha umlilo abendlu siqu esikhundleni download umlilo omusha Druids imililo ukuze bazivikele.
Abeza ovela endaweni yomoya, kungenzeka bobabili niphane ngezipho loNyaka Omusha, isibonelo, nesithembiso ukubuya ukukhanya emva ekwindla nasebusika nenzalo ezinhle ngonyaka ozayo - noma landa imiphefumulo yalabo abafa kusihlwa / ubusuku, ngisho zidinga lemihlatshelo yabantu ngenxa unyaka omusha. Kuphathelene izinzuzo noma iziqalekiso.
Nansi ngesisekelo nezindaba izingane ezinye, owayephila ngesikhathi sika emnyango ebusuku ngaphambi Bonke Osanta noSuku: "Candy noma ibhasi", "Trick-noma-uswidi" ( "Spratt noma isipho"). USamhain ukuthi batshelwa kokubili umuphi kanye Reaper Abuhlungu. Ngakho-ke kulindeleke ukuba ahloniphe. umkhosi the Christian Church sika All Day Saints, kwaphakama sinqobe yobuqaba Celtic sokuvuna umkhosi.
Futhi i ekuseni Irish ngokwezifiso kwakuwukuzifaka zicela isinkwa ezindlini, futhi ukubuya, thandazela imiphefumulo kwabaphansi. Ekugcineni kwakukhona ukudideka, mhlawumbe impendulo okulumba "förkristnandet" - ngisho yobuqaba lezixuku ezingcwele nezindawo eziphakeme yayingasebenzi phansi, esikhundleni salo kwafakwa amasonto abangamaKristu amangcwaba - ukuze "zonke abaphilayo ebusuku efile," umqondo wobuqaba, kwaba, abanye hambisa "Allahelgonaafton", ngamanye amazwi i-Halloween.
Ukubuyela kusukela Melika
Esikhathini 1840s, wathatha ikakhulukazi Irish naye lo mkhosi Celtic lapho efudukela Melika. EMelika, sesiye isidlo esikhulu, okukhona ngisho naphakathi kwamaKristu futhi kugujwa Okthoba 31. Kusukela Melika, it has "Americanized" iminyaka ethile, wabuyela eYurophu "izingebhezi" ozwakala amathanga *, izangoma-isethi, buso ezesabekayo, abukhali, uSathane izimfoloko tombstones ngepulasitiki noma ukhuni.
Ezinye idatha Ezinye izazi zisikisela ukuthi inkampani nge amahlaya njengoba 1991 waqala ukwethulwa eSweden. A iflaya kusuka eziwukudla eminyakeni embalwa edlule kwaba: "Ngakho ukuqoqa spökkompisar futhi uSathane bakho a real Halloween party futhi ulungele ebusuku egcwele wamademoni."
Ngakho-ke lokho indlela ayabulala, ugogo, uyise, izingane zakwabo nabangani ngabe unjani ukube babuya efile njengoba izipoki, izinhlaka zamathambo namademoni! Kungani ugqoka kungaqali ke okuningi okufana okuthiwa banomoya omuhle futhi "izingelosi" e ukulumba, uma ufuna sokulingisa izihlobo zabo nabangane owafa - nokuthi manje kusho uya emuva?
Ngokusobala Halloween ukugubha ngoba abaseSweden kakhulu nje umdlalo elingenacala, ngaphandle wacabanga ukuthi kwakungeke kube enye into ngemuva. Kodwa kungani kufanele ebumnyameni futhi kuba ungakhululekile ukuba egqanyisiwe? Ingabe uvalo ukupela izinkathazo esingokwemvelo?
Ngiyingane yini lo muntu indoda nge ukufa ukuze uthole kude wemfanelo phambi kokufa langempela? Halloween kumele lithathwe ngokuthi Ukuphunyuka kunesidingo ukubhekana namaqiniso? Yebo, i-Halloween nje buyindlela ngokwezifiso asendulo obuqaba ukuthi akekho umuntu okufanele bahlanganyele, awumncane yini kuyo yonke yobuKristu. Ukufa nokubi akhazinyuliswe.
Esikoleni, izingane zifunda ukuba ayeke udlame. Futhi okhuluma kangaka mayelana nokuvikela izingane, okokuqala cabanga izithakazelo izingane. I wokubhekela izidingo zomuntu kanye egameni lenkululeko ahlinzekwa ngesikhathi esifanayo lezi zingane sokufa kanye nodlame izimpawu ezikoleni, abezindaba kanye nomphakathi uwonke. amazinga kabili bese naivety, ngithi! Yeka ukuthi inkulu kangakanani isidingo esinaso sokuba party kuka lapha eSweden ngesikhathi ekwindla eside futhi omnyama, Halloween isibonelo esihle!
Sicela umake, njengomKristu, ezweni lemimoya futhi kunkulumo-mpikiswano kawonkewonke kule ingane abanamusa kusihlwa yobuqaba. Kodwa Phendula ngenkathi idlala izingane Costumed umKristu. ngokuhlakanipha. Zwi, isibonelo, ngomusa, ukuthi awuligubhi Halloween. Kunokukwenza kujwayele ukuthi kungabi lempela. Ukuzama "amaKristu" Halloween, ngiqonde Ngakolunye uhlangothi, indlela engalungile.
* Ngokusho nganekwane Irish, kwakukhona wensimbi ababi uJack. Jack wamkhohlisa uSathane bambeka athembisa neze ukumangalela umphefumulo wakhe. Lapho ekugcineni wafa yena sinqatshiwe yokungena ezulwini ngoba kubangelwa izinto eziningi kangaka lapha emhlabeni. Wabe angagcina noDeveli, wahlala umphefumulo ezulazulayo emhlabeni. Wabuza uDeveli okungenani uthole lantern. UDeveli la lapho umlilo omncane itheniphu eziyize Jack wadla. Kusukela ngaleso sikhathi iyazula restlessly emhlabeni nge "lantern" yakhe futhi ngifuna indawo yokuhlala. Ngo imidlalo kanye zamasiko ngokuthi isibani eyodwa esinjalo "Jack-o-lantern", ikakhulukazi lapho kuhloswe ukuba okwesabisa away imimoya emibi kanye.